यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका पाँच निर्णय (सूचीसहित) – Daunne News
By Daunne News	 Last updated Sep 21, 2021
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय ,
१. राजनीतिक नियुक्तिका सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने,
२. कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सलिसल्ला, सिमिकोट खण्डको बुल्दिकुनादेखि लालीबगरसम्म सडकखण्डको सात किलोमिटर र लैखुबद्री गाउँदेखि हुकाखोलासम्म १३ दशमलब ५ किलोमिटर सडक निर्माणको ट्र्याक निर्माणण कार्य नेपाली सेनालाई थाल्न स्वीकृति प्रदान,
३. कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान । औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान,
४. कोभिड १९ व्यवस्थापन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने,
५. संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधिमण्डल गठन ।
सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय
केपी ओली सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका हुन ।
ओली सरकारको भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान नियुक्त गरेका राजदूतहरु फिर्ता हुने भएका छन् । भारतका लागि निलाम्बर आचार्य, अमेरिका लागि पूर्वमन्त्री डा युवराज खतिवडा, चीनमा महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बेलायतमा लोकदर्शन रेग्मी र जापानमा प्रतिभा राणा राजदूत छन् ।